Ny Oniversiten'i Adélaïde - Fianarana any Aostralia, be International
Ny Oniversiten'i Adélaïde
fanafohezan-teny : UoA
Créé : 1874
Aza adino ny discuss The University of Adelaide
Ny Oniversiten'i Adélaïde dia izao tontolo izao-kilasy fahatelon'ny lanjan'ny fampianarana sy ny fikarohana nataony ny fikambanana nanafaka avo lenta sy miavaka fianarana, fampianarana sy ny fikarohana zavatra niainana.
Ny Oniversiten'i Adélaïde dia mifototra amin'ny:
mahita fahalalana vaovao
manomana ny nahita fianarana mpitarika ny rahampitso izay mahaleo tena, famoronana mpandinika miaraka amin'ny fomba fijery iraisam-pirenena.
Ny Oniversiten'i Adélaïde hery mitaona avy amin'ny mpanorina ny soatoavina toy ny manatanteraka ny ho avy fikarohana sy ny fampianarana hetaheta.
Ny University dia fikambanana iraisam-pirenena izay natao manokana mamihina ny tonga lafatra ny fikarohana oniversite, aiza ny fientanentanana, heriny sy ny fitiavana ny fikarohana fahalalana vaovao dia iray izay mpianatra rehetra handray anjara; toy ny nohazavaina sy fandeferana fiaraha-monina izay afaka afaka mahita mpianatra fanohanana, na inona na inona ny mombamomba na ny toe-javatra; ary ho toy ny toerana misy ny vahoaka Kaurna, custodians am-boalohany ny tany izy tamin'izany izay ny campus izao miala sasatra, dia ekena sy hajaina ny kolontsaina.
Ny Oniversiten'i Adélaïde endri-javatra miavaka
Mpianatra iray tenan'ny demokratika sakany
Tehina iraisam-pirenena hafa
Ny fanahin 'ny fahafahana mba hanadihady saha vaovao
Ny fahatsapana ny maha zava-dehibe ny fiaraha-monina
Ny tanjona mba hanomana nahita fianarana mpitarika.
Ny Oniversiten'i Adélaïde manao ny fomba miavaka izay recaptures ny tsara ny fikarohana oniversite, ary mitady ny iraisam-pirenena-mifantoka mpiasa sy ny mandefitra, miandalana mpianatra Mix, izay manomana ny mpianatra ho an'ny eran-zom-pirenena any amin'ny tontolo miha borderless. Ho eny amin'ny oniversite ny marina ara-tantara ny fakany, nefa Nampirisika nanao ho any amin'ny anjara asany eo amin'ny famokarana nahazo diplaoma natao mba hilalao mpitarika ny faritra ao amin'ny Asian Century.
Ny fianarana sy ny fampianarana isan-karazany dia mahafaoka ny malalaka ny undergraduate sy nahazo diplaoma teny mari nateriny amin'ny University.
Ny mpianatra dia omena amin'ny tsy manam-paharoa sy ny fanabeazana holistic traikefa sy ny toetra ireo nahazo diplaoma mifanaraka amin'ny asa vokatra. Ny diplaoma Manan-danja ny miova fepetra takiana ny mpampiasa sy ny zavatra ilaina amin'ny indostria sy ny fiaraha-monina.
Anarana iombonana amin'ny Fianarana
jeografia, Environment and Population
politika & International Studies
Faculty ny Engineering, Computer & matematika Sciences
School ny Civil, tontolo iainana & harena ankibon'ny tany Engineering
Sekoly ny Computer Science
School ny elektrika & Electronic Engineering
fiterahana & Gynaecology
fitsaboana maso, & Visual Sciences
Sekoly maritrano ary nanorina Tontolo_iainana
ny fandraharahana, Commercialisation & Innovation Centre (ECIC)
School ny Toekarena
Faculty ny Siansa
School of Agriculture, sakafo & Wine
Sekoly ny biolojika Sciences
The University of Adelaide was established on 6 Novambra 1874 after a £20,000 donation by grazier and copper miner Walter Watson Hughes, along with support and donations from Thomas Elder.
The great hall of the University, Bonython Hall, was built in 1936 following a donation from the owner of The Advertiser gazety, Sir John Langdon Bonython, who left £40,000 for a Great Hall for the University.
Ianao ve mila discuss The University of Adelaide ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Ny Oniversiten'i Adélaïde ofisialy Facebook